ဒါဟာ IPHONE ကနေ SMS ပို့မထားဘူး - IOS အတွက် - 2019
တစ်ဦးတက်ကြွအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နဲ့မှတ်စုစာအုပ်နှင့်အတူ, ဥပမာအားဖြင့်, Local network ပေါ်ရှိ, အသုံးပြုသူကြိုးမဲ့အင်တာနက်ပေးသုံးနိုငျသောက virtual access point, အပေါငျးတို့သ gadgets (စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, လက်တော့ပ်, ဂိမ်း consoles စ, etc ရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ်ဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေဖွင့်လှစ် ) ။ ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအရာ - အင်တာနက်ကို၏ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်, အရည်အသွေးလက်ပ်တော့ဆော့ဖ်ဝဲကိုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
virtual Router Manager ကို - လည်း World Wide Web ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်သောအခြား devices များရန်သင့် Laptop ကိုဒါမှမဟုတ် desktop ကွန်ပျူတာ (Wi-Fi ကို adapter ၏ရရှိမှုမှဘာသာရပ်) မှအင်တာနက်ဖြန့်ဝေခွင့်ပြုထားတဲ့ Microsoft က Windows အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ utility ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့က Wi-Fi ကိုမှဖြန့်ဖြူးဘို့အခြားအစီအစဉ်များကိုကြည့်ရှုအကြံပြု
အဆိုပါ login နဲ့ password ကိုချိန်ညှိခြင်း
မဆို wireless network ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့အမည်ဖြင့်ရှိပါတယ်သောဤကွန်ယက်အတွက်အခြားအသုံးပြုသူများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင်ကျူးကျော်သူတွေကအသုံးပြုမှုကနေသင့်ရဲ့ကွန်ယက်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုကြံ့ခိုင်တဲ့စကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ချင်တယ်။ Duration: password ကိုအနည်းဆုံးရှစ်ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သင့်သည်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမျိုးစုံကအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီး အကယ်. ထို program ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်ရင်းမြစ်များ, အတိအကျကိုအင်တာနက်၏ဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်သည့်အနေဖြင့်အရင်းအမြစ်ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းချိတ်ဆက်ကိရိယာများအကြောင်း displays သတင်းအချက်အလက်များ
မည်သည့် device ရဲ့ wireless network ကိုချိတ်ဆက်သောအခါ, အဓိကပြတင်းပေါက်ထိုကဲ့သို့သောင်း၏အမည်, အိုင်ပီနဲ့ MAC-လိပ်စာများအဖြစ်သတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Virtual Router Manager ၏အားသာချက်များ:
1. လုံးဝမဆိုအသုံးပြုသူကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည့်ရိုးရှင်းသော interface ကို,
2. installation ကိုပြည့်စုံပင်ဖြစ်သည်ပြီးနောက်အများအပြားအလားတူအစီအစဉ်များကိုမတူဘဲ, Virtual Router Manager ကိုတစ်ဦး operating system ကိုပြန်ဖွင့်မလိုအပ်ပါဘူး,
Virtual Router Manager ၏အားနည်းချက်:
1. ရုရှားဘာသာစကားများအတွက် interface ကိုထောက်ခံမှုမရှိခြင်း။
virtual Router မန်နေဂျာ - နီးပါးမျှ setup ကိုရှိပါတယ်ထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးသင်လိုအပ် - တစ်ဦးရဲ့ login နဲ့ password ရိုက်ထည့်ပါကအင်တာနက်ရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုသတ်မှတ်, နှင့်ပရိုဂရမ်အင်တာနက်ကိုလက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်သည်။ ပိုလျှံတဲ့ functions တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးအစီအစဉ်ကိုမလိုအပ်ပါဘူးသူကိုအသုံးပြုသူများအများအတွက်စံပြဖြေရှင်းချက်။
Virtual Router Manager ကိုအခမဲ့ Download
Virtual Router Switch virtual Router Plus အား virtual CloneDrive DVDFab ရဲ့ Virtual Drive ကို
virtual Router Manager ကို - သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူ built-in Wi-Fi module တစ်ခုနှင့်အတူကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးကြိုးမဲ့ကွန်ယက်ကိုလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်အသုံးဝင်တဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။
System ကို: Windows7ကို, 8, 8.1, 10
ရေးသားသူ: ခရစ် Pietschmann